Ntuziaka Site na Ihe Otuto: Otu esi eme ihe niile na-abịa na ekwentị gị
Ting Ting. Ị natara ozi ozugbo. Ị na-etinye akwụkwọ akụkọ ahụ, gbanye n'ime akpa n'akpa uwe gị ma wepụ ekwentị gị. Arrgh. I megharịrị. Ị gụrụ ihe yiri nke a: 'Real Rolex Watch, 30% Gbanyụọ'. Ị na-elele nọmba ezigara ahụ na-enwe olileanya na ọ bụ onye ị maara na ị ghọtara na ị hụtụbeghị ya. Enwerela gị spammed.
Julia Vashneva, Semalt Onye na-ahụ maka ndị ahịa na-ahụ maka ndị ahịa, kwuru na taa, smartphones aghọwo ihe mgbaru ọsọ maka mgbasa ozi mgbasa ozi na-enweghị isi. Mgbe ụfọdụ, onye na-ezipụ nwere ike ịbụ azụmahịa dị mma (onye ị ji obi gị nye ọnụ ọgụgụ gị) ma mgbe mgbe, ha sitere na ọnụahịa efu na ngwaahịa mgbasa ozi na ngwaahịa na / ma ọ bụ onyinye. I nwere ike iche na nke a bụ usoro mgbasa ozi telemarketing. Ha na-ewe iwe, ma ị nwere ike igbochi ha maka ihe ọma.
Ihe ndị dị mkpa
Ọ bụrụ na i chere na spam bụ ihe nhụjuanya, ọ ga-eju gị anya ịmara na ọ bụ iwu na-akwadoghị. Federal Trade Commission (FTC) na-ekwu na ọ bụ iwu na-ezighi ezi iziga ozi azụmahịa ọ bụla a na-akwadoghị na ngwaọrụ ikuku (gụnyere pagers na cellphones) ma ọ bụrụ na onye nnata ahụ achọghị maka ozi dị otú ahụ. Dị ka ọ dị, ọ nweghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na otu nzukọ ị na-akpakọrịta na-arịọkarị maka ikikere gị iziga gị akwụkwọ akụkọ. Otú ọ dị, iwu ahụ nwere ozi na-abụghị nke azụmahịa dị ka nyocha na ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - enweta ozi sitere na ụlọ ọrụ ị nụtụbeghị? Ọfọn, enwere ohere ha na - emebi iwu. Ọ bụrụ na ị nweta ozi ederede na-achọ maka Pin ma ọ bụ paswọọdụ gị, nke ahụ bụ obi ọjọọ.
Gbochie ọnụ ọgụgụ onye zitere
Nke a bụ n'ụzọ doro anya usoro kachasị mfe ma dị mfe iji wepụ spam. Na ịhọrọ ngwa ozi, gbochie onye na-eziga. N'ụzọ na-akpali mmasị, onye na-ezipụ agaghị aghọta na ị na-egbochi ha. Na ngwa ngwaọrụ Android, pịa oghere vertical atọ n'elu akuku aka nri. Họrọ "Ndị mmadụ & Nhọrọ" wee "Gbochie". Na iPhone, kama igodo atọ kwụsịchaa site na igbochi nọmba ahụ.
Kọọrọ onye na-ahụ maka ọrụ gị
Ị nwere ike inwe afọ ojuju site na igbochi onye nzipu ma ọ bụrụ na Federal Trade Commission agaghị echefu ma ọ bụrụ na ị rụrụ arụ ọrụ obodo: ịkọ akụkọ ọjọọ. N'agbanyeghị onye na-ahụ maka ọrụ na-agagharị agagharị, ị nwere ikike ijide ajụjụ gbasara spammer. Chọpụta nọmba pụrụ iche a raara nye netwọk gị maka ịkọ akụkọ dị otú a. Ọ bụrụ na ndị mmadụ gbakọtara ọnụ iji lụso ndị spammers ọgụ, ụwa ga - ahụ obere ozi nza oyi iwe.
Chebe onwe gị
Ka anyị were ọnọdụ nke ị ga-esi chọpụta onye onye ozi spam ahụ bụ. Ọ ga-efu oge gị? Eleghị anya ọ bụghị. Ohere bụ na ị gaghị enweta ihe ọ bụla. Echiche a dị mfe. Ọ bụghị ezigbo echiche isoro onye zipu ya. Ọfọn kachasị gị ga-egbochi ha na / ma ọ bụ kọọrọ ndị ọchịchị dị mkpa.
Okwu nke ịkpachara anya. Ejila njikọ ọ bụla enyere na ozi ederede. Na mgbakwunye na nke a, azaghachila arịrịọ ọ bụla maka akaụntụ email gị nbanye, nkọwa data kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ozi ọ bụla ọzọ Source .